ဒုစရိုက် ၁၀-ပါးTen Unwholesome Behaviors 十大不健康行為 - ရတနာဝါသ ဘုရားကျောင်း 華緬 三寶寺
Posted by ukkmaung on December 19, 2010 at 8:08pm
ဒုစရိုက်ဆိုသော စကားသည် ပါဠိစကားဖြစ်သည်။
ဒု-မကောင်းသော။ စရိတ-ကျင့်ကြံပြုလုပ်ခြင်း ဟူ၍ အနက်ရသည်။
မကောင်းသော ကိုယ်မှု၊ မကောင်းသော နှုတ်မှု၊ မကောင်းသော စိတ်မှုတို့ကို ဒုစရိုက်ဟုခေါ်သည်။
ဘုရားရှင်၏ ဟောကြားချက်အရ ဒုစရိုက် ၁၀-ပါးရှိသည်။ ယင်းတို့မှာ ဒုစရိုက် ကာယကံ ၃-ပါး။ ဒုစရိုက် ၀စီကံ ၄-ပါး။ ဒုစရုက် မနောကံ ၃-ပါးတို့ ဖြစ်သည်။ ယင်းတို့တွင်
(၁) သူ့အသက်သတ်ခြင်း (ပါဏာတိပါတ)
(၂) ပိုင်ရှင်က ကိုယ်နှုတ်တို့ဖြင့် မပေးအပ်သောဥစ္စာကို ခိုးယူခြင်း။ (အဒိန္နာဒါန)
၃) ကာမဂုဏ်တို့၌ မှားယွင်းစွာကျင့်ခြင်း။ (ကာမေသုမိစ္ဆာစာရ)
တို့သည် ဒုစရိုက် ကာယကံ ၃-ပါး ဖြစ်သည်။ ယင်းတို့ကို အများသူငါ အားလုံးလိုလိုပင် သိရှိကြသည်။
သို့ရာတွင် ဒုစရိုက် ၀စီကံ ၄-ပါးကိုကား အသိနည်းကြပေသည်။ ဒုစရိုက် ၀စီကံ ၄-ပါးမှာ-
(၁) မဟုတ်မမှန် ပြောဆိုခြင်း။ (မုသာဝါဒ)
(၂) ကုန်းတိုက်စကား ပြောဆိုခြင်း။ ချစ်သူနှစ်ဦး ကွဲကွာသွားအောင် ရန်တိုက်ပေးခြင်း။ (ပိသုဏ၀ါစာ)
(၃) ဆဲရေးတိုင်းထွာခြင်း စသော ကြမ်းတမ်းသောစကား ပြောဆိုခြင်း။(ဖရုသ၀ါစာ)
(၄) အကျိုးမရှိ အနှစ်မဲ့သော စကားကို ပြောဆိုခြင်း။ (သမ္ဇပ္ပလာပ) တို့ ဖြစ်သည်။
ဒုစရိုက် မနောကံ ၃-ပါးကိုလည်း အသိနည်းကြပေသည်။ ယင်းတို့မှာ-
(၁) သူတပါးပစ္စည်းကို ငါ့ဟာ ဖြစ်လျှင် ကောင်းလေစွ-ဟု မတရားကြံစည်ခြင်း။ (အဘိဇ္ဈာ)
(၂) သူတပါးကို သေကျေပျက်စီးစေလိုခြင်း။ (ဗျာပါဒ)
(၃) အယူမှားခြင်း။ (မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိ) တို့ဖြစ်သည်။
ဤနေရာ၌ အယူမှားခြင်းဆိုသည်မှာ ကံ-ကံ၏ အကျိုးကို မယုံကြည်ခြင်း ဖြစ်သည်။
တနည်းအားဖြင့်-ကောင်းမှုလုပ်လျှင် ကောင်းကျိုးရသည်။ မကောင်းမှုလုပ်လျှင် မကောင်းကျိုးရသည်-ဟု မယုံကြည်ခြင်း။
ကောင်းမှုလုပ်လည်း ကောင်းမှုမဖြစ်၊ မကောင်းမှုလုပ်လည်း မကောင်းမှု မဖြစ်-ဟူသော အယူမှားခြင်းမျိုး ဖြစ်သည်။
ဤဒုစရိုက် ၁၀-ပါးသည် အပြစ်ကြီးလှသည်။ အပါယ်သို့ ရောက်စေတတ်သော လမ်းခရီးဖြစ်သောကြောင့် အကုသလကမ္မပထ-ဟုလည်း ခေါ်သည်။
ဤဒုစရိုက် ၁၀-မျိုး အကုသိုလ်အမျိုးမျိုးတို့တွင် မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိ ဒုစရိုက်ဖြစ်သော ကံ-ကံ၏ အကျိုးကို မယုံကြည်မှုသည် အပြစ်အကြီးလေးဆုံး ဖြစ်ကြောင်း ဗုဒ္ဓဘုရားရှင် ဟောတော်မူခဲ့သည်။ မိစ္ဆာအယူအစွဲသန်လျှင် သန်သလောက်၊ အယူသည်းလျှင် သည်းသလောက် သေပြီးနောက် ငရဲသို့ တောက်လျှောက် ကျရောက်ခံရကြောင်း၊ ကမ္ဘာပျက်၍ သတ္တ၀ါများ ဗြဟ္မာဘုံသို့ ပြောင်းရွှေ့ကြသော်လည်း မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိငရဲသားမှာ ပြောင်းခွင့်မရ။ ဆက်၍ ငရဲ၌ ခံနေရကြောင်း ကျမ်းဂန်တို့၌ အတိအလင်း မိန့်ဆိုထားသည်။
Ten Unwholesome Behaviors
du - unwholesome + carita - behavior = ducarita - unwholesome behaviors
Three Unwholesome Behaviors Committed by Bodily Action (Ducarita Kāya-kamma)
1. pāṇātipāta - killing another living being.
2. adinnādana - stealing, taking someone else's belongings without their permission.
3. kāmesu micchācāra - sexual misconduct, engaging unabashedly in sexual relations to the point of being blameworthy.
Four Unwholesome Behaviors Committed by Verbal Action (Ducarita Vacī-kamma)
4. musāvāda - speaking lies, saying what is not true.
5. pisuṇavācā - slandering (saying words that will divide two people who love each other and/or influence one or the other to get them to like you better than they like each other).
6. pharusavācā - speaking harshly or swearing.
7. samphappalāpa - talking frivolously or vainly (speaking words that have neither essence nor underlying deep meanings that are true and correct).
Three Unwholesome Behaviors Committed by Mental Action (Ducarita Mano-kamma)
8. abhijjhā - covetousness, jealousy, thinking that it would be great to have something that belongs to someone else and scheming to get it in an unwholesome manner. (It is not abhijjhā if you ask for it, borrow it, or buy it from the person to whom it belongs.)
9. byāpāda - ill will, thinking that it would be great if someone died, became injured or destroyed.
10. micchādiṭṭhi - wrong view (not believing in Kamma and its results, i.e. that wholesome deeds cause wholesome results and unwholesome deeds cause unwholesome results.)
du 杜 -不健康+ carita凱伊黛 -行為= ducarita -不健康的行為
1. pāṇātipāta - 殺死另一個生命。
2. adinnādana - 偷竊，以別人的財物未經其許可。
3. kāmesu micchācāra -性行為不端，公然從事性關係，這一點被責備。
4. musāvāda - 講的謊言，說什麼是不正確的。
5. pisuṇavācā - 誹謗（說的話，將分兩個人誰愛對方和/或影響一個或另一個讓他們比他們更喜歡你喜歡對方）。
6. pharusavācā - 嚴厲地或講髒話。
7. samphappalāpa -談輕率或妄想（說的話有沒有本質，也不是潛在的深層含義是真實和正確的）。
8. abhijjhā - 貪婪，嫉妒，認為這將是巨大的，有一些屬於別人，圖謀把它在一個不健康的方式。（這不是abhijjhā如果你問它，借，或買它的人從她所屬。）
9. byāpāda - 不懷好意，認為這將是巨大的，如果有人死亡，受傷或成為破壞。
10. micchādiṭṭhi - 錯誤的觀點（不相信的業力 ，其結果，即該行為造成健康有益成果，不健康的行為導致不健康的結果。）